बिज्ञान/प्रविधि Archives - Page 48 of 50 - inaruwaonline.com
यी ५ टिप्स अपनाउनुस्, आफ्नो ल्यापटप सुरक्षित राख्नुस्
कुनै यात्राका क्रममा झोलामा ल्यापटप बोक्नु आवश्यक मात्र भएको छैन एउटा ट्रेण्ड नै बनेको छ । तर महंगो चिजवस्तु हुनुको नाताले यसको सुरक्षाको विषय निकै संवेदनशील हुने गर्छ । घरमा होस् वा यात्रामा, आफ्नो महत्वपूर्ण प्रयोगको वस्तु ल्यापटपको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । यसका लागि निम्न ५ टिप्स उपयोगी हुन सक्छन्ः · प्याडेड कभरः यात्रामा विभिन्न उतारचढाव आउन सक्छन् । त्यसैले त्यस्ता कठिनाइ तथा क...
नेपालीले बनाएको सगुन डटकमले ५ वर्षमा ५ बिलियन डलर कमाउने
अमेरिकामा बस्दै आएका नेपाली नागरिक गोविन्द गिरीले लामो समयको मेहनतपछि स्थापना गरेको सामाजिक सञ्जाल सगुन डटकमको आइतबार राजधानीमा दोस्रो संस्करणको औपचारिक ग्लोबल लञ्चिङ गरिएको छ । कार्यक्रममा आकर्षकका रुपमा हेरिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिमोटको बटम दबाई प्रोजेक्टरमार्फत सार्वजनिक गरेर सरकारले आवश्यक परेको सहयोग माग्न गिरीलाई आग्रह गरे र सहयोग गर्ने प्रतिपद्धता समेत जनाए । ओल...
छाति बाहिर मुटु भएकी बालिका
उनले विज्ञानलाई समेत चुनौति दिएकी छिन् र सबैलाई आश्चर्यचकित पारिरहेकी छिन् । जन्मिनेबित्तिकै मर्छे भनेर डाक्टरले घोषणा गरेकी यी बालिका ६ वर्षकी भैसकेकी छिन् । विर्साविया बाथसेवा बोरुन गोचारोभा निकै सुन्दर छिन् । तर उनलाई नियतिले ठूलो सजाय दिएको छ । छातिभित्र सुरक्षित रहनुपर्ने मुटु उनको छाति बाहिरै झुण्डिएको छ र बाहिरै धडि्करहेको छ । पेन्टालोजी अफ क्यान्ट्रेल नामक जन्मजात दुर्लभ रोगबाट प...
१ जिबीको मेमोरी कार्डलाई यसरी बनाउनुस् २ जिबी
आधुनिक युग ग्याजेटको युग हो । नयाँ नयाँ एप तथा सफ्टवेयर बजारमा आइरेका छन् । स्मार्टफोनमा धेरै भन्दा धेरै डाटाहरु संग्रहित गर्ने आवश्यकता बढ्दैछ । तर यस्तोमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हुन्छ स्मार्टफोनको स्टोरेज क्षमता । जसका कारण मेमोरी कार्ड प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । निश्चित क्षमताको मेमोरी कार्ड फुल भएपछि अर्को प्रयोग गर्नुको विकल्प हुँदैन, किनकी त्यो भरिएपछि त्यसमा अरु डाटा अटाउन सकिँदैन । तर नआ...
फेसबुकमा आए अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा
अब जो कोहीले अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । उनको फेसबुक वालमा म्यासेज लेख्न सक्नु हुनेछ र उनलाई लाइक वा शेयर गर्न पनि सकिनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले ‘प्रेसिडेन्ट ओबामा’ नामबाट फेसबुक अकाउन्ट खोलेका छन् । यो पहिलाबाट चलेको फेसबुक अकाउन्ट ‘बाराक ओबामा’ भन्दा फरक हो । ओबामाले आफ्नो पहिलो पोष्टमा लेखेका छन्-हलो फेसबुक । मैले आफ्नै पेज पाएको छ । मलाई लाग्छ यहाँ...
बिहिबार, कार्तिक २६, २०७२
गुगलका ७ प्रडक्टहरुको विश्वमा दबदबा
दुनियाको सबैभन्दा ठूलो प्रविधि कम्पनी गुगलको नाम नसुन्ने कमै होलान् । प्रविधिका विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न गुगलका विविध प्रडक्टहरुको विश्वमा दबदबा रहेको छ । गुगलका अनुसार उसको एक अर्को उत्पादन गुगल प्ले स्टोर यस्तो छैटौँ उत्पादन बनेको छ जसका प्रयोगकर्ताको संख्या १ अर्ब नाघेको छ । विश्वमा दबदबा कायम राखेका गुगलका उत्पादनहरु यी हुन्: १. एन्ड्रोइड अपरेटिंग सिस्टमः विश्वमा १ अर्ब ४० करोड मानिसले ...
सोमबार, कार्तिक २३, २०७२
पोखराका मियाँद्धारा खाना पकाउने बनस्पति ग्यास उत्पादन (भिडियो सहित)
२२ कार्तिक । लमजुङको करापुटार नगरपालिका लक्ष्मि बजारमा बसोबास गर्ने रदि मियाँले खाना पकाउन बनस्पतिबाट ग्यास उत्पादन गरेका छन् । नाकाबन्दले गर्दा देश भरिनै इन्धन र अरु खाधान्य लगायत ग्यासको अभाव भएकै कारणले मियाँले केहि विकल्प निकाल्नु पर्ने सोचमा यो ग्यासको उत्पदन गरेका हुन । उनले बताए ‘गाउँ घर तिर पाइने विभिन्न प्रकारका बनस्पति जस्तै सालधुप, बाँसको पानी लगायत सामाग्री मिसाएर खाना पकाउन...
फेसबुकमा यि कुरा हाले जेल सजाय हुनस्क्छ
फेसबुकले मानिसलाई धेरै सजिलो बनाइदिएको छ । मानिसहरुले यसको सही हिसाबले पनि प्रयोग गरेका छन् र दुरुपयोग पनि गरिरहेका छन् ।फेसबुक ट्वीटरमा जे पायो त्यही पोष्ट गर्ने वा सन्देश पठाउने मानिसहरु सावधान हुन जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता बढेका र अपराध पनि बढ्दै गएकाले यसबारे विभिन्न कानुन बन्दै गएका छन् । केही समय पहिले भन्दा अहिले मानिसहरु सचेत पनि भएका देखिन्छन् । नक्कली अकाण्ट बनाउने...
टेलिकमले ल्यायो सानो ‘भोल्यूम’को डाटा प्याकेज
२० कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सानो ‘भोल्यूम’को डाटा प्याकेज ग्राहकमाझ ल्याएको छ । ग्राहकबाट सानो डाटा प्याकेजको अत्याधिक माग भएकोले यस्तो प्याकेज ल्याएको टेलिकमले जनाएको छ । नयाँ डाटा प्याकेज आइतबारदेखि लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । टेलिकमले ८ रुपैयाँदेखि ३५ रुपैयाँसम्मको दुई दिनदेखि १० दिनसम्म अवधि भएको प्याकेज ल्याएको हो । उल्लेखित महसुल दरमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिने छ । सेव...
वाइफाईको पासवर्ड चाहियो ? यसो गर्नुहोस
कयौं पटक सम्झन खोज्दा पनि वाइफाइको पासवर्ड सम्झिन सकिएन भने केहि विधि अपनाएर सहजै राउटरको पासवर्ड पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो पासवर्ड सामान्य फर्म्याटमा देख्न सकिन्छ जसलाई प्रयोगकर्ताले सहजै पढ्न सक्दछन्। यो पासवर्ड आफ्नो पर्सनल वाइफाई नेटवर्कमा मात्रै काम लाग्दछ। अफिसको नेटवर्क वा अन्य प्रयोगकर्ताको पासवर्ड पत्ता लगाउन यो विधि अपनाउनेः स्टेप १ कम्प्युटर वा ल...